Ukwazi emva koko into ayaziyo ngoku, # MyHodgesStory »Hodges U
Ukwazi emva koko into ayaziyo ngoku
Ukwazi emva koko oko akwaziyo ngoku - #MyHodgesStory Martha "Dotty" Faul
Kudala ngaphambi kokuba uMartha “Dotty” Faul abhalise kwiYunivesithi yaseHodges, uchithe phantse iminyaka engama-20 esakha ikhono lonyanzeliso lomthetho kwiOfisi yeSheriff yeDeSoto County kunye neOfisi yeCherlotte County Sheriff.
Ukusuka ekusebenzeni kwindlela yokujikeleza njengesekela-sheriff ukuya ekusingatheni uphando lolwaphulo-mthetho njengomcuphi, uFaul ubonile kwaye wabona ubungqina obuninzi onokucinga ngabo. Ehleli kwicala lomthetho oluchaphazeleka kakhulu kukubi kunye nobunzima boluntu, uFaul uthathe umhlala phantsi ngo-Agasti ka-2009 kwaye wavula ishishini lakhe, IiNkonzo zoPhando lwezoBulungisa, Inc.., ngo-2010 njengendlela yokumnika uncedo kwabo baludingayo.
Ngelixa bekumabakala okuqala okuvula ishishini lakhe, waqonda ukubaluleka kwesidanga esinokubonelela ngokwakha inkampani yakhe. Ngelixa babesebenza kwiOfisi kaCharlotte County Sheriff, abameli abasuka kwiYunivesithi yaseHodges (eyayibizwa ngokuba yiKholeji yaMazwe ngaMazwe) batyelele ukuxoxa ngeminikelo yezifundo.
"Ndiyazisola ngokungabamkeli ngelo xesha," wahleka. "Kodwa xa kufika ixesha lokuba ndibuyele esikolweni, ndakhumbula uHodges, ndaye ke ndabhalisa kwisikolo seshishini ngo-2009."
Emva kokuchitha iinyanga ezintandathu kwinkqubo yeshishini kunye nokusebenza kwintengiso kunxweme olusempuma yeFlorida, uFaul waqonda ukuba iitalente zakhe zilungele ubulungisa kulwaphulo-mthetho, hayi ishishini, ngenxa yoko watshintsha iinkqubo zesidanga, esenza zonke iiklasi zakhe kwi-Intanethi.
Njengomfundi okwi-Intanethi, uyavuma, “Ndivakalelwa kukuba ndiye ndafumana ingqalelo engakumbi kuba iibhodi zeengxoxo zindinike ithuba lokuthetha, kwaye abafundisi bebefumaneka lula. Khange ndibenaxhala lokuba ixesha liphelile ekupheleni kweklasi kwaye ndingxamele phambili ndibuze umbuzo kunjingalwazi. ”
Ukuzisa iminyaka yakhe yamava kunyanzeliso lomthetho kwinkqubo yakhe yesidanga, uFaul waqonda ukuba ungakanani umsebenzi wakhe wobungcali ojolise kwindawo enye kuphela, kunye nendlela ezi zifundo zibonelela ngayo ngengqondo ebalulekileyo kwindawo enkulu yezolwaphulo-mthetho.
“Ezi zifundo zindifundise ngolawulo, izilungiso kunye nomthetho wolutsha. Ndifunde lukhulu ngembali yezobulungisa kulwaphulo-mthetho kunye nendlela iinkcubeko ezahlukeneyo ezisebenzisa ngayo ubulungisa kulwaphulo mthetho, utshilo.
Ukumfumana Isidanga sokuqala kwi-Criminal Justice Kwi-2012, wagxila kwimizamo yakhe yokwakha ishishini lakhe. Yena neqela lakhe labaphengululi abangama-20 basebenza kunye nelizwe laseFlorida ukunceda abantu abahlelelekileyo kwinkqubo yezobulungisa kulwaphulo-mthetho abangenako ukuzikhusela ngokwasemthethweni. Ukusebenza ngokusondeleyo namagqwetha, uFaul kunye neqela lakhe basebenzise ubuchule babo ukunceda ekuqokeleleni iinyani, ubungqina kunye nolwazi ukwakha ityala elifanelekileyo.
Ngelixa amatyala aqala kubuqhophololo ukuya ekubulaleni ukuya kubantu abalahlekileyo, uFaul usebenzisa ubuchwephesha bakhe ekufumaneni ubuxoki nobuqhetseba ukunceda kuphando; Nangona kunjalo, ngenxa yohlobo lweshishini lakhe kunye nokunxibelelana kwayo nenkqubo yezomthetho, waphinda wabuyela kuHodges ukuze aqhubekeke nemfundo yakhe, ngeli xesha kuphela kwizifundo zomthetho.
"Ndithethile noGqirha [Char] Wendel, wandixelela ukuba izifundo zomthetho zahluke kakhulu kunezobulungisa, kodwa ndiye ndafumanisa ukuba ndiyayithanda, kwaye ezi zinto zibini zihamba kunye, utshilo. .
Ukubhalisa kwi- UMphathi wezeNzululwazi kwiZifundo zoMthetho Inkqubo yesidanga kwi2016, uFaul uyavuma ikharityhulamu kunye nokunikezelwa kuye kwamenza wakwazi ukufaka isandla kwishishini lakhe ngendlela entsha ngokupheleleyo. Ukufunda malunga neetort, ukuthotyelwa kunye nokushwankathelwa kwamatyala, uFaul usebenzisa ulwazi ukunceda ukutshintsha indlela yena neqela lakhe abanokunceda ngayo amagqwetha abo.
Ukwazi indlela osebenza ngayo umthetho kukunceda kakhulu xa uphume esitratweni. Ukuba ndiyayazi ukuba kuzakwenzeka ntoni enkundleni kwaye kutheni befuna izinto ezithile, iyakulilungisa ityala lam, ”ucacise watsho. "Ngoku, kwelinye icala, ndiyayazi into ebekufanele ukuba bayayenza, ke ndingayihambisa kummeli wam ndibancede."
Kusele iiveki nje ezimbalwa ngaphambi kokuba aphumelele isidanga ngo-Disemba 2017 enesidanga senkosi yakhe, uFaul ujonge phambili ekuthatheni ulwazi kunye namava obuchule kunye nokwandisa iitalente zakhe kwindawo yokufundisa.
Ndidlule kwizinto ezininzi ezahlukeneyo, kwaye ndifuna ukubuyisa ezinye zazo, kwaye ukufundisa yeyona ndlela yokwenza. Ukukwazi ukwabelana ngamava am kunye nokwabelana nolunye ulwazi endilufundileyo kunye nendlela yokulusebenzisa-oko kunganelisa kakhulu kum. ”
tags: Ulwaphulo-mthetho, IYunivesithi yaseHodges, IHodgesU, Izifundo zoMthetho, UMartha Faul, INkosi yezifundo zomthetho, Hlala kufutshane Yiya kude